छ्या तिमी त कस्तो छा.डा मान्छे ? – Khabarbot
छ्या तिमी त कस्तो छा.डा मान्छे ?
छ्या तिमी त कस्तो छाडा मान्छे ?
शनिबार बेलुका कार्यालयबाट घर पुग्नेबित्तिकै ‘फ्रेस’ भएर मोबाइलमा ‘क्लब हाउस’मा पसें । सररर मोबाइल स्क्रोलिङ गर्दा चिनेजानेकै साथीहरुले पठन संकृतिका विषयमा बहस चलाइरहेका थिए । केहीबेर अडिएँ । तरकारी केलाउँदै कार्यक्रम सुनिरहें । एकै बक्ताले अलि लामो बोलेपछि त्यहाँबाट बाहिरिएँ ।
फेरि एउटा शीर्षकले तान्यो– ‘छ्या तिमी त कस्तो ?’ शीर्षक देख्नेबित्तिकै यो ‘बडी सेमिङ’ को विषयमा तयारी पारिएको कार्यक्रम भएको भन्ने लख काट्न गा¥हो भएन । कार्यक्रम सुन्दै गएपछि दुई जनाको अनुभवले मन कटक्क बनायो । एक २२ वर्षीया युवती आफ्नो कालो छाला भएको कारण भोग्नु परेका समस्या अनि हेलाँहोचोको कारणले आफू पटक–पटक निराश हुनुपरेको बताइरहेकी थिइन् । (कथा )
ipo update : आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको क्रेडिट रेटिङ्गमा इक्रा नेपालले लघुवित्तलाई ‘इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग त्रिपल बि माइनस’ रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यस्तो रेटिङ्ग प्राप्त गर्ने संस्थाहरु समयमा वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम मात्रामा सु्रक्षित र मध्यम क्रेडिट जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।लघुवित्तकाे प्रतिशेयर नेटवर्थ साे अवधिसम्ममा ३०५ रूपैयाँ २७ पैसा रहेकाे छ।
सिर्जना फाइनान्सको बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत : सिर्जना फाइनान्स (SFFIL) को बोनस शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ । फाइनान्सको ११ लाख ५१ ह्जार ९५०.१७ कित्ता बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो ।फाइनान्सले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मुनाफाबाट शेयरधनीहरूलाई १३.५९ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.६८ प्रतिशत नगद गरी कुल १४.२७ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो ।
उक्त बोनस शेयर बिहीबार नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो ।शेयरधनीको डिम्याट खातामा आएपछि फाइनान्सको बोनस शेयर दोस्रो बजारमा किनबेच गर्न सकिनेछ । एकैदिन १ हजारभन्दा धेरैले घट्यो सुनको भाउ, चाँदीको भाउमा पनि गिरावट : बिहीबार सुन र चाँदी दुबैको भाउ घटेको छ। आज सुनको भाउ तोलामा १ हजार १०० रुपैयाँले घटेको छ भने चाँदीको तोलामा २० रुपैयाँले घटेको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार छापावाला सुन प्रतितोला ९२ हजार रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला ९१ हजार ५०० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुन प्रतितोला ९३ हजार १०० र तेजाबी सुन प्रतितोला ९२ हजार ६०० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो।यस्तै चाँदी पनि तोलामा २० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला १ हजार ३४० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। अघिल्लो दिन चाँदी प्रतितोला १ हजार ३६० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो।
आमाले बुबालाई फ,साउन खेलेको खेल हो भन्दै छोरा मिडियामा